Soomaaliya, 10 June 2019
Ilayska VOA: Soomaalida iyo siyaasadda Yurub
Somaliland: Biyaha Roobka oo la Keydinayo
Xilligan waxaa gobollada Somaliland si wanaagsan uga curtay roobab xoog leh, iyadoo biyaha ay dooxooyinku soo rogaanna ay sida caadada ah ku darmaan badda. Laakiin inta badan xilli ka dib, waxaa aad looga cawdaa biyo la’aan iyo abaaro soo noqnoqda.
Wicitaanka: Dr. Maxamed Daahiye Ducaale
Barnaamijka Wicitaanka Dhageystaha ee toddobaadkan waxaa marti ku ah Dr. Maxamed Daahiye Ducaale oo ah xildhibaan laga soo doorto deegaanka Dhadhaab ee W. B. Kenya, waxana uu ka jawaabayaa su'aalaha qaar dhageystayaasheena ka tirsan
Barnaamijka Hambalyada iyo Heesaha waxaa soo jeedinaya Nur Bukhari iyo Ibrahim Xasan Dandurey.
Kusoo dhawaada barnaamijka Dhacdooyinka Todobaadka. Waxaa soo jeedinaya Jamal Axmed Cisman.
Xaalka Soomaalida Dagan Malaysia
Dad Soomaali ah oo u badan dhalinyaro waxbarta ayaa ku nool dalka Malaysia.
Sarkaal boolis ahaa oo la sheegey inuu isku daldalay Muqdisho
Sarkaal ka tirsanaa ciidamada booliska Soomaaliya ayaa la sheeey in uu saakay isku dhex daldalay xerada Sheelare ee degmada Xamar Jajab ee magaalada Muqdisho.
Faaqidaadda: Xasaradaha ka taagan Bariga Dhexe
Bandhigga VOA: Saameyta xiisadda Soomaaliya iyo Kenya